आँचलले नभने रामकहानी चल्दैन होला र ? – Mero Film
आँचलले नभने रामकहानी चल्दैन होला र ?
२०७५ भदौ ४ गते १३:३७
अभिनेत्री आँचल शर्माको बोलीमा एउटा कुरा अहिले छुट्दैन । अभिनेत्री आँचल शर्मा र अभिनेत्री पूजा शर्माको विवाद सामुन्ने आएपछि आँचल एउटा कुरा भन्न छोड्दिनन् । आँचलले अहिले हरेक इन्टरभ्यूमा अभिनेत्री पूजा शर्मालाई नआत्तिन भन्छिन् ।
उनले, पूजालाई ढुक्क हुनुहोस्, तपाइको रामकहानी चल्छ भनेर सान्तवना दिइरहेकी छिन् ।
आँचलको भनाई त यस्तो लाग्छ कि, उनले नभनेको भए पूजाको रामकहानी चल्दैनथ्यो होला । फिल्म चल्ने र नचल्ने त दर्शकको हातमा छ । तर, पूजाले निकिता पौडेलमाथि स्टाटस लेखेपछि आँचलले पनि पूजालाई ब्यङ्ग्य गर्दै स्टाटस लेखिन् र पछि हटाइन् । यसपछि, पूजा र आँचल विच वार नै चलेको छ ।
पूजालाई बारम्बार सान्तवाना दिदैआएकी आँचल आफैले अभिनय गरेको फिल्मको व्यापारबारे कत्तीको जानकार होलिन् ?
फिल्ममा पैसा लगानी गरेपछि कोही पनि मानिसको मन आत्तिन्छ । व्यापार कस्तो होला भन्ने छटपटी त हुन्छ । तर, आँचल बारम्बार रामकहानी चल्छ, ढुक्क हुनुहोस् भन्दै पूजालाई सान्तवना दिइरहेकी छिन् कि अरु नै के ? वुझ्न गाह्रो भयो ।
निराजन र सुरक्षा एक्शन अवतारमा प्रस्तुत
कलाकार भण्डारी ‘डिठ्टा साब’ वडा सदस्यमा विजयी
‘सम्झना बिर्सना’को ‘परेलीमा’ रोमान्टिक पुजा र आकाश
कालो हरिण मामिलामा सलमान खानलाई ठूलो राहत
आँचलको ‘वर’ बन्दै विवेक
‘परदेशी २’को फस्टलुक फष्टलुक पोष्टर र प्रदर्शन मिति सार्वजनिक